Dakhliga dalxiiska ee 2021 wax ka yar kala bar heerarkii hore ee masiibada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dakhliga dalxiiska ee 2021 wax ka yar kala bar heerarkii hore ee masiibada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dakhliga safarka iyo dalxiiska adduunka ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro kaliya $ 385 bilyan sanadka 2021, wax ka yar kala bar heerarkii hore ee COVID-19.
Faafida COVID-19 waxay dhalisay kororka suuqa ugu weyn taariikhda.
Xeerarka qufulka si loo xakameeyo faafitaanka fayraska, ayaa horseeday kumanaan fasax oo la baajiyay, iyo hoteello la xiray.
Wadarta khasaaraha ka soo xarooda suuqa safarka iyo dalxiiska ayaa la filayaa inay goobjoog ka ahaadaan sannadkan.
Wadammada adduunka oo dhan waxay bilaabeen u diyaargarowga xagaaga 2021 horaantii sannadka si dib loogu soo nooleeyo safarka dhulkooda loona oggolaado dalxiisayaasha inay si ammaan ah u booqdaan.
Wadarta qufulka bilaha ugu horreeya ee 2021, awoodda tijaabinta oo korodhay, iyo xitaa mamnuucidda dhammaystirka imaanshaha aan daruuriga ahayn, gaar ahaan waddamada leh fayrasyada is-beddelka, dhammaantood waxay qayb ka ahaayeen dadaalladan. Si kastaba ha ahaatee, wali kuma filna in la joojiyo khasaaraha sii kordhaya ee ka dhashay saamaynta tooska ah ee masiibadu ku yeelatay dalxiiska iyo qaybaha kale ee sida dhow ugu xidhan.
Marka loo eego xogta warshadaha ee ugu dambeysay, dakhliga safarka iyo dalxiiska adduunka ayaa la saadaalinayaa inay gaaraan kaliya $ 385 bilyan sanadka 2021, wax ka yar kala bar heerarka COVID-19 ka hor.
Warshadaha Dalxiiska iyo Hoteelka ayaa ahaa kii ugu xumaa, Dakhligii la isku daray oo dhan $ 258 billion
COVID-19 wuxuu kiciyay qandaraaskii ugu weynaa ee suuqa soo mara taariikhda, maaddaama waddamada adduunka oo dhan ay soo rogeen xeerar xirid si loo xakameeyo faafitaanka fayraska, taasoo horseeday kumanaan fasax oo la baajiyay, iyo hoteello la xiray. In kasta oo qaar badan oo iyaga ka mid ah ay joojiyeen xayiraadihii safarka oo dib loo furay xilligii xagaaga ee 2021, wadarta khasaaraha dakhli ee suuqan la filayo in la arko sannadkan weli waa mid aad u weyn.
Sanadkii 2020, dakhligii qaybta oo dhan wuxuu hoos ugu dhacay ku dhawaad ​​60% YoY ilaa $ 298.5 bilyan, ayaa shaaca ka qaaday xogtii ugu dambeysay. In kasta oo tiradani la filayo inay korodho ku dhawaad ​​30% ilaa $ 385.8 bilyan sannadka 2021, taasi weli waa $ 351 bilyan oo ka yar intii ka horraysay masiibada.
The warshadaha maraakiibta ayaa weli ah qaybta ugu daran ee ku habsatay suuqa socdaalka iyo suuqa dalxiiska. Sanadka 2021, dakhliga maraakiibta adduunka ayaa lagu wadaa inuu gaaro kaliya $ 6.6 bilyan, ama 76% ka yar tii 2019. Warshadaha hoteelku waxay raacaan dakhli dhan $ 132.3 bilyan iyo 64% laba sano gudahood. In kasta oo malaayiin dalxiisayaal ah ay go'aansadeen inay fasax galaan xilliga 2021-ka, haddana tirakoobyadu waxay muujinayaan isugeynta dakhliga labada qaybood inay sii ahaan doonto $ 258 bilyan oo ka hooseysa heerarkii hore ee masiibada.